Niman hubeysan oo xildhibaan katirsan Puntland ku dilay magaalada Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandNiman hubeysan oo xildhibaan katirsan Puntland ku dilay magaalada Gaalkacyo
May 23, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. [Sawirka]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Niman hubeysan ayaa xildhibaan katirsan Puntland ku dilay magaalada Gaalkacyo fiidnimadii caawa oo Arbaco ah, sida ilo-wareedyo ammaanka katirsan ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Cabdixakiin Macalin Daahir, oo ahaa xildhibaan katirsan Puntland ayaa niman baastoolado ku hubeysan ku dileen meel u dhow huteel Classic ee Gaalkacyo, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
Mid kamid ah ilaaladiisa ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka, ilo-wareedka ayaa intaas ku daray.
Ma jirto koox si deg deg ah u sheegatay masuuliyada dilka, balse maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay dhowr dil oo lala beegsaday masuuliyiin katirsan Puntland gudaha Gaalkacyo sanadihii lasoo dhaafay.
Gunmen shoot dead Puntland lawmaker in Galkayo
Kismaayo-(Puntland Mirror) Masuuliyiinta sare ee maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Kismaayo maanta oo Axad ah iyadoo uu soo aadanyahay shirkooda. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo sidoo kale ah guddoomiyaha madasha maamul goboleedyada ayaa [...]